Ciidamada Amniga oo howlgalo ka fuliyey bartilmaameedyo ku yaala Degmooyinka Waaberi, Hodan iyo Wadajir – idalenews.com
Ciidamada Amniga ayaa xaley waxay howlgalo ay dad ku soo qabqabteen ka fuliyey seddex degmo oo ku yaala magaalada caasimada ee Muqdisho oo kala ah Wadajir, Waaberi iyo Madiino. Waxayna howlgalkaasii oo baro gaar oo tilmaaman ku wajahnaa ku soo qabqabtey dad aad u tiro badan oo aan la sheegin tiradooda, kuwaasoo hadda ku jira gacanta ciidamada Nabad suggida iyo booliiska.
“Howgalladan waxay ahaayeen kuwo ammaanka lagu xaqiijinayay wayna socon doonaan inta ammaanka caasimadda laga adkeynayo,” ayuu yiri sarkaal ka mid ahaa kuwii hoggaaminayay howlgallada, kasoo diiday inuu magaciisa sheego.
Mudanaha la dilay ayaa wuxuu sodog u ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, iyadoo mas’uuliyadda dilkiisa ay sheegatay Al-shabaab oo ku sheegay inuu ahaa farriin ay u dirayaan xildhibaannada kale ee baarlamaanka.
Magaalada Muqdisho ayaa u muuqato mid amaankeedu faraha ka sii baxaayo iyadoo maalintii shaley ah oo kaliya la diley tiro kor u dhaafeysa 5 qofood oo ay ku jirto haweeney iyo xildhibaan dowlada ka tirsan kuwaasoo lagu diley meelo kala duwan oo Magaalada caasimada ee Muqdisho.